US oo dooneysa Joojinta duqeynta Qaza - BBC News Somali
Image caption Maydadka dad Falastiiniyiin ah oo ku dhintay duqeynta
Afhayeen u hadlay aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inay isku deyeen inay dhinac seddaxaad kala shaqeeyaan xaaladda Bariga dhexe si la isugu deyo soo afjaridda qalalaasaha.
Josh Earnest ayaa sheegay dadka rayidka ah ee ku dhimanaya duqeynta Israel ay ka waddo Qaza inay tahay arrin laga xumaado, wuxuu intaa ku daray in Tal Aviv ay xaq u leedahay inay isdifaacdo.
Wuxuuna u sheegay labada dhinacba inay soo afjaraan dagaalka, Mareykankana uu ka caawin doono sidii arrintaasi loogu guuleysan lahaa.
Xoghayaha difaaca ee Mareykanka, Chuck Hagel, ayaa dhankiisa tilmaamay in Mareykanka uu sameeyay wixii karaankiisa ah si dagaalka loo joojiyo.
Balse, Osama Xamdan, oo ah wakiilka Xamaas ee Beirut, ayaa sheegay arrintan inay tahay hadadaadaha ay horey isugu deyeen Ra’iisul wasaarayaasha Israel oona guuldaro ku dhammaaday. Wuxuuna intaa raaciyay inaan heshiis la gaarin karin, haddii Israel aysan ciidankeeda kala bixin Qaza.
Ra’iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inaysan qiimo lahayn cadaadiska caalamiga ah inuu Israel ka joojiyo inay isticmaasho dhammaan awoodeeda ka dhanka ah wax uu ugu yeeray Argagixisada Qaza.
Hadaladan ayuu jeediyay iyadoo madaxa hay’adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka, Navi Pillay, ay ka digeyso in ololaha militariga ee Israel inuu xadgudub ku noqon karo xeerka caalamiga ah.